ARRIMAHA BULSHADA – Warfaafiye:
Kumuu ahaa ciyaartooygii Itoobiya ee ku biiray xulka qaranka Soomaaliya?
Ali Mohyadin Jun 16, 2018 0
Sawirro: Paris Hiltin oo faraanti jooga $2 milyan ugu dhex dhumay…
Daawo: Filim laga sameeyay xasuuq Al-Shabaab ka geysatay Mandheere oo Oscar u tartamaya
Ali Mohyadin Jan 25, 2018 0
Filim laga sameeyay weerarkii lagu qaaday baskii Mandera, bishii Desembar ee sanadkii 2015kii ayaa loo xushay in uu u tartamo abaalmarinta aflaanta caalamiga ah ee Oscar. Filimka wuxuu noqday midkii ugu wanaagsanaa oo ku saabsan dhacdo dhab…
Cilmi baaris lagu ogaaday in Basasha daawo u tahay cudur dunida ku faafsan
Ali Mohyadin Jan 23, 2018 0
Cilmi Baarayeyaal ayaa sheegay in Nooc ka mid basasha la ogaaday in laga sameeyo dawada looga hortago cudurka qaaxada, Islamarkaana ay daawo u tahay Qaaxadda. Waxaa cilmi baarista lagu sameeyay jaamacadaha London iyo University College of…
Nin xaaskiisa ka duubtay muuqaal qosol badan oo top noqday: Video
Ali Mohyadin Jan 22, 2018 0
Tim Beseckers oo subaxnimo u socda shaqo xili ay wehlisay xaaskiisa ayaa waxaa ku qabsaday gurigiisa hortiisa qiso uusan waligii ilaaweyn oo uu nasiibku baxsaday. Xaaskiisa ayaa muuqaalkaan gaaban ka duubtay isla markaana soo dhigtay baraha…
Xildhibaan qosolka ka dhameeyay baraha bulshada: Video
Ali Mohyadin Jan 21, 2018 0
Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka Ingriiska oo lagu magacaabo Desmond Swayne ayaa baraha bulshada iyo warbaahinta ku faafay, kaasoo qosolka ka dhameeyay baarlamaanka dalka UK iyo dadka isticmaala baraha bulshada. MP Desmond Swayne…
Soomaali modelada dharka u xayeysiiya shirkadaha waaweyn oo wacdaro dhigay: Sawirro
Ali Mohyadin Jan 20, 2018 0
Mahad Musse (20-jir) kuna nool dalka Norway ayaa kusoo biiray modelada dharka u xayeysiiya shirkadaha waaweyn, waxaana uu ka qeyb galay bandhig lagu xayeysiinayay dharka sannadkan 2018 kaas oo ka dhacay magaalada Paris. Shirkadda VOGUE ee…